Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Chikumi 24, 2020
Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu nemakumi maviri nevashanu, vafa vari vatanhatu.
Studio 7 inoita hurukuro nemumwe mukuru mubazi rezvehutano anoona nezvenzvimbo dziri kuchengeterwa vari kubva kunze kwenyika kana kuti quarantine centers, VaVictor Nyamandi, pamusoro pemamiriro akaita zvinhu kunzvimbo idzi uye kutiza kwevanhu vanodarika zana nemakumi masere nevana.
MDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa inoendesa kumatare mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDC-T, Muzvare Thokozani Khupe, pamwe neZimbabwe Electoral Commission iine chinangwa chekuti ma by elections asaitwe munyika.
MDC-T inotara zuva richaitwa kongiresi yayo yekutsvaka hutungamiri hutsva zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court wakati zvakaitwa naMuzvare Khupe naVaNelson Chamisa zvekuita makongiresi avo mushure mekushaya kwaVaMorgan Tsvangirai, zvakanga zvisiri pamutemo.
Nhengo yeZanu PF, VaStanley Nleya, vanoradzikwa pamarinda emagamba muHarare.
Sangano reAfrican Diaspora Forum, iro rinomirira zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa, rinoti rinotambira nemufaro hurongwa hwekuda kuvhurwa zvakare kwenzvimbo dzekudyira pamwe nedzekugadzirwa kwemisoro munyika iyi dzakanga dzavharwa munguva ino yeCovid-19, asi riri kushushikana nemashoko evamwe vakuru muhurumende ekuti vashandi vekunze vari mumabhizimusi aya vakachadzikiswa huwandu hwavo
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa veZimbabwe zviri kunze kwenyika